» सज्जा चौलागाईलाई अवार्ड नै अवार्ड
सज्जा चौलागाईलाई अवार्ड नै अवार्ड
मकवानपुर, १५ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको सिजन ३ मा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । नेपाल आईडलको मञ्चमा रक स्टारको छबि बनाएकी मोरङकी सज्जा चौलागाईँ गाला राउण्डबाट थप चर्चित बनेकी छिन् । गाला राउण्डको पहिलो हप्ताको रेस्पेक्ट पर्फोमेन्सको विजेता बन्दै उनले नेपाल आईडलमा सफलताको अर्को खुड्किलो पार गरेकी हुन् । बिहीबार प्रसारण भएको गाला राउण्डको पहिलो एपिसोडमा उनले सुगम पोखरेलको आवाजमा रहेको ‘जाँदैछु टाढा बोल’ को गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । निकै नै दमदार प्रस्तुति दिएका सज्जाको पर्फोमेन्सलाई तिनै जना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । गाला राउण्डमा सज्जाको प्रस्तुति दोस्रो रेस्पेक्ट प्रस्तुति बन्न सफल भएको थियो । सोही प्रस्तुतिका आधारमा सज्जालाई ‘रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक’ को अवार्ड जितेकी हुन् । अवार्ड जितेसँगै उनले रेस्पेक्टको ईसेवा वालेटबा नगद २५ हजार रुपैयाँ जितेकी छिन् । उनले काठमाडौँ अडिसन र थिएटर राउण्डको बेस क्याम्पबाट ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे’ को अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । यसर्थ उनले नेपाल आईडलमा ३ वटा अवार्डहरु जितिसकेकी छिन् । उनी मात्र अहिलेसम्म सिजन ३ मा तिन पटक अवार्ड जित्ने प्रतियोगी हुन् ।
नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । उनी अहिले काठमाठौँ नारायणटारमा बसोबास गर्दै छिन् । साँगितिक दुनियाँमा ६ वर्षदेखि संघर्षरत सज्जा रेष्टुरेन्टहरुमा समेत गीगहरु गाउँछिन् । आमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा साईप्रास गएपछि सज्जाले भाईको जिम्मेवारी समेत बहन गर्दै आएकी छिन् । बुवा गाउँमा भएका कारण भाईका लागि आवश्यक सबै कुराको जोहो गर्न उनी संघर्षरत छिन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन समेत दिएर बसेकी सज्जा एसएलसी पश्चात नै ब्याण्डमा जोडिएकी थिईन् । ‘द लोडिङ ब्याण्ड’ मा आवद्ध उनलाई ब्याण्ड मेम्बरहरुले साँगितिक करियर निर्माणकालागि निकै सहयोग गरेका छन् ।आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।